नेपाल आज | सरकार वनाउन विपक्षिलाई पनि सकस, कुन विकल्पमा वन्ला नयाँ सरकार ?
सरकार वनाउन विपक्षिलाई पनि सकस, कुन विकल्पमा वन्ला नयाँ सरकार ?
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसदमा विश्वासको मत गुमाएपछि उनी स्वतः पदमुक्त भएका छन्। संविधानतः अव राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नयाँ सरकार गठनका लागि प्रकृया अगाडि वढाउनु पर्ने छ।
प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत गुमाउनासाथ विपक्षि दलका नेताहरु कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै संविधानको धारा ७६ को उपधारा २ बमोजिम नयाँ सरकार गठक प्रक्रिया प्रारम्भ गर्न राष्ट्रपतिलाई आह्वान पनि गरेका छन् ।
संविधानको धारा ७६ को उपधारा २ (१) बमोजिम प्रतिनिधि सभामा कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत नरहेको अवस्थामा प्रतिनिधि सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुई भन्दा बढी दलहरूको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रतिनिधि सभाको सदस्यलाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ ।
तर, वर्तमान राजनीतिक उतार चढावका कारण यो ब्यवस्था अनुसार पनि सहजै रुपमा सरकार वनि हाल्ने अवस्था छैन । सरकार वन्नका लागि जसपाको महन्थ ठाकुर पक्ष निर्णायक भएको छ।
संसदमा विश्वासको मतको मतदानपछि देखिएको मत गणनाका आधारमा कांग्रेस–माओवादी र जसपा (उपेन्द्र यादव पक्ष) गठबन्धनले मात्रै पनि सरकार वन्ने अवस्था छैन । सरकार गठनका लागि १३६ सांसदको आवश्यक्ता छ।
एमालेका नेपाल– खनाल समुहका सांसदहरू उपस्थित नहुँदा केपी ओलीको पक्षमा जम्मा ९३ मत पर्यो भने विपक्षमा पनि १२४ मत मात्रै छ। यो संख्या जसपाको उपेन्द्र यादव पक्षसमेतको हो। त्यसैले अव कांग्रेस माओवादी मिलेर सरकार वनाउन १२ मत अझै कम हुने देखिएको छ। जसका लागि जसपाको महन्थ ठाकुर पक्षलाई फकाउँदा पुग्छ। तर, महन्थ ठाकुरले पक्ष/विपक्षमा नलाग्ने घोषणा गरेकाले उनले सहजै रुपमा सरकार वनाउन सहमति देलान भन्ने अवस्था छैन। अर्कोतर्फ मधेश आन्दोलनमा विभिन्न मुद्धा लगाएर जेल हालिएका १२० नेता/कार्यकर्ताको रिहाईका कारण पनि ठाकुरले संसदमा ओलीको गुणगान गाएका छन्। यस अर्थमा पनि ठाकुरलाई फकाउन कांग्रेस माओवादीलाई सहज दखिदैन।
यदि विपक्षिहरुले गठवन्धन गरेर पनि सरकार वनाउन नसके पुनः संसदमा ठूलो दलको हैसियतमा एमालेको संसदीय दलका नेता केपी शर्मा ओलीकै अल्पमतको सरकार वन्ने अवस्था पनि छ। यिनै दुई विकल्प मध्ये अवको नयाँ सरकार वन्ने राजनीतिक विश्लेषकहरु वताउँछन् ।
अर्को विकल्प भनेको केपी शर्मा ओलीले बहुमत सावित गरी पुनः प्रधानमन्त्री नियुक्त हुने सम्भावना पनि रहेको तर, त्यो सम्भावना आफनै पार्टीको किचलोका कारण अहिले सम्भव नदेखिएको उनीहरुको भनाई छ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली विश्वासको मत राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी सरकार गठन